टिकटक र विच्याटमाथिको प्रतिबन्धले चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ? « हातमा खबर
टिकटक र विच्याटमाथिको प्रतिबन्धले चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २४ श्रावण शनिबार १४:३६
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ एप टिकटक र विच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै अमेरिकी विज्ञहरुले यो कुरा महत्वपूर्ण नभएको बताएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ एप टिकटक र विच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा बिहीबार मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको एकदिन पछि अमेरिकी विज्ञहरुबाट यो प्रतिक्रिया आएको हो ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दै यो प्रतिबन्ध अघि सारेका बताइएको छ । यो कार्यकारी आदेशबमोजिम आगामी ४५ दिनमा टिकटकको कम्पनीका पनि सबै कारोबारमा नै प्रतिबन्ध लाग्ने बताइएको छ ।
यी एपले अमेरिकाको विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा नै यी दुई कम्पनीका एप्सहरुले असर पार्न सक्ने देखेर यो प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको थियो ।
तर पनि अमेरिकाका साइबर क्राइम सम्बन्धका विज्ञहरुले यी एपहरुको प्रतिबन्धले अमेरिकाका नागरिकको तथ्यांक संकलनको काम रोक्न त्यति ठूलो सहयोग नपुर्याउने बताएका छन् ।
उनीहरुले अहिले अमेरिकीहरुले देखेको अमेरिकी साइबर सुरक्षाको खाँचोका लागि खासै ठूलो सहयोग नपुर्याउने बताएका छन् । बरु यो विच्याटमाथिको प्रतिबन्धले अमेरिकीहरुलाई सञ्चार गर्ने काममा असजिलो बनाएको बताएका छन् ।
उता यी एपका चीनका सञ्चालकहरुमाथि पनि उनीहरुको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने भएकोले यसले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा पनि असर गर्न सक्ने बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)ले आगामी वर्ष सन् २०२१ का लागि ६ अर्ब ४०
भारतमा कोभिड १९ को खोप केही हप्तापछि आउँछः प्रधानमन्त्री मोदी
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिड १९ भाइरसका विरुद्धको खोप केही हप्तापछि उपलब्ध हुने
अमेरिकामा एकैदिन २ लाख १७ हजारमा कोरोना संक्रमण
विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १५ लाख नाघेको छ । पछिल्लो
ब्रिटिश प्रक्रियाप्रति पूर्ण विश्वास छः फाउची
वेलायतले हतारोमा कोरोनाभाइरस खोपको प्रयोग अनुमति दिएको भन्ने आफ्नो अघिल्लो टिप्पणी सच्च्याउँदै अमेरिकाका